Ciyaar Sixiroole 🥇 Gali oo Ku raaxayso Emulator.Online
Ciyaar Sixiroole. Waa ciyaar aad u xiiso badan, waxay horumarisaa caqliga iyo xusuusta iyo xirfadaha meelaha. Ogow taariikhdeeda, noocyadeeda iyo sida loo ciyaaro.
Game sixirrood: sidee loogu ciyaaro talaabo talaabo? 🙂
Si aad ugu ciyaarto Sixiroolaha Ciyaarta khadka tooska ah bilaash, si fudud raac tilmaamahan tallaabo-tallaabada ah :
1 Step . Fur furaha biraawsarkaaga aad door bido oo aad tagtid bogga ciyaarta Emulator.online.
2 Step . Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad gujisaa Play oo waxaad bilaabi kartaa xulashada qaabeynta aad ugu jeceshahay. 🙂
Tallaabada 3. Halkan waa badhano waxtar leh. Waad awoodid Ku dar ama ka saar codka ", taabo" Play "badhanka oo bilow ciyaarta, waad awoodaa" Haki "Iyo" Dib u bilow "xili walba.
Tallaabada 4. Si aad ugu guuleysato ciyaarta waa inaad cuntaa dhammaan tufaaxa adigoon ku garaacin derbiyada ama naftaada . Qofkii dhibcaha ugu badan hela dhamaadka ciyaarta ayaa guuleysan doona.
Tallaabada 5. Kadib markaad dhamaysato ciyaar, guji "Dib u bilow" in dib loo bilaabo.
Waa maxay ciyaarta sixirka? 🔴
Sixiroolaha waa ciyaar fudud oo xiiso leh inaad ka heli karto khadka tooska ah boggan.
Snake- Noocyada ciyaaraha ayaa ah kuwa loogu doon doonista badan yahay fudeydkooda, ciyaaridooda iyo inay ahaadaan kuwo aad u baashaal badan, Saaxirkana waa mid kamid ah kulamada kulmaya astaamahan oo dhan.
Sixiroolaha ayaa ushiisa ku tuuraya kubado midabbo leh oo silsilad ah, kana kooban isla goobahan. Hadafka saaxiradu waa in kubadaha oo dhan la waayo intaysan gaarin daloolka ugu dambeeya. Si tan loo sameeyo, waa inaad ku biirtaa saddex ama in ka badan kubbadaha oo isku midab ah si ay u qarxaan oo ay uga dhammaadaan silsiladda oo ay u gaaraan yoolkaaga.
Sheeko sixir ⚫
Ciyaaraha sida Saaxirka, oo ujeedadoodu tahay in la burburiyo silsiladda kubbadaha iyadoo laga tuurayo goobooyin midabbo leh meel go'an, ayaa la sameeyay 1995.
Dhagaystayaasha bartilmaameedku waxay ahaayeen carruur. Waxay ahayd a ciyaarta caruurta , maadaama farsamadiisu fududayd oo kubbadaha midabada leh ay carruurta oo dhami jeclaadeen. Laakiin waqti yar gudahood, waxaa soo baxday in caruurta kaliya aysan rabin inay ciyaaraan, dadka waaweyn sidoo kale jeclaaday kulankaan . Tani waxay si farxad leh uga yaabisay abuurayaasheeda iyo noocyo badan ayaa lagu abuuray isla mowduucan.
Caan ahaantooda weyn waxaa sabab u ahaa xaqiiqda inay noqon karto lagu ciyaaray kumbuyuutar ka dib markii aad iibsatay kaydadka, waana sababta loogu tiriyey ciyaar pc. Maalmahan, muhiim maahan in si muuqata loo iibsado ciyaarta oo horumar weyn ah.
Its naqshad fudud macnaheedu waa in lagu ciyaari karo qalab kasta, ha ahaato qalabka kombiyuutarka, mobilada, kiniiniyada iyo xitaa lacag la'aan ah iyada oo loo marayo bogagga internetka.
Iyadoo aan lahayn hordhacyo waaweyn, oo aan loo baahnayn sharuudo muuqaallo badan ama dhib badan, tani waa ciyaar fudud, tartan iyo madadaalo leh.
Noocyada ciyaaraha sixirka 🔵
Ciyaar saaxir waa nooc ciyaaraha midabada midabada leh . Waxa kale oo aad ku garan kartaa inay yihiin ciyaaro xumbo ama toogashada xumbada ujeedkuna waa isku mid, burburi silsiladda ama isku xigxiga kubbadaha midabada leh adigoo tuuraya goobooyin. Markaad isku dhejiso saddex ama in ka badan oo isku midab ah, waa la tirtirayaa.
Waxaan magacaabi doonnaa cayaaraha ugu matalaya qaabkan.
Waa mid ka mid ah goobooyin ugu caansan . Xaaladdan oo kale maahan silsilad kubbado, laakiin kubbadaha ayaa ku ururaya saqafka sare ee shaashadda waana inaad baabi'isaa intaanay dhulka ku soo degin.
Nooc kale oo casri ah oo cayaaraha fiidiyowga xumbo leh, oo aad u badan nidaam fudud laakiin dhakhso leh taasi waxay kugu qasbeysaa inaad si dhakhso leh u fikirto haddii aadan rabin mashiinku inuu ku garaaco.
Xumbooyinku waxay ku wareegaan wareeg taasi waxay si khatar ah ugu dhowdahay xarunta. Si looga hortago inay taasi dhacdo, waa inaad toogataa goobooyin si aad ugu soo bandhigto silsiladda, adigoo ka dhigaya kooxo ka kooban 3 ama ka badan si ay u gaabiyo. Haddii aad ku dhammeysato mid ka mid silsiladaha waxaad aadi doontaa heerka ku xiga, si dhakhso leh oo ka sii dhib badan. Ma noqon doontaa midka ugu dambeeya ee ka adkaada masaska midabbada badan leh?
Xaaladdan oo kale, waxaa jira wax ka beddello xaqiiqduna waxay tahay goobooyinku waxay u egyihiin kala duwan miraha , oo aad u baahan tahay inaad ku biirto kooxo ka kooban 3 ama ka badan si aad u baabi'iso oo aad u nadiifiso shaashadda.
Si kastaba ha noqotee, ciyaartan waxay leedahay waxyaabo kooban oo ka dhigaya mid muuqda. Tusaale ahaan, kolba waqtiga ka dib goobooyinku hoos ayey u sii dhacayaan , sidaa darteed haddii aadan dhaqso uga jawaab bixin, waxaa laga yaabaa inaad is aragto dhamaadka ciyaarta wax aad uga horeysa sidii aad filaysay.
Iyo haddii aad weli rabto inaad ka dhigto mid xiiso leh, isku day qaabka midab-kala-gooynta, taas oo midabada la beddelay oo aad ku fududaan karto, ama maya.
Xeerarka ciyaarta Sixiroole 📏
Ku ciyaarista Saaxirka waa wax fudud oo xiiso leh , taasi waa sababta ay u tahay ciyaar ku habboon carruurta iyo dadka waaweyn.
Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah isticmaal shaqaalaha saaxirka si aad kubadaha ugu dirto meesha saxda ah silsiladda. Hadafkeenu waa in la abuuro koox ka kooban ugu yaraan 3 kubadood oo isku mid ah si ay kubadahaasi uga baaba'aan silsiladda oo markaa looga hortago inay koraan.
Waa inaad baabi’i dhammaan kubbadaha kahor intaysan gaarin dhamaadka ee wadada oo ku dhex siiban godka.
Degdeg maxaa yeelay si dhakhso leh ayey u socotaa! Waxaa jira 3 heerar kala duwan oo lagu dhammaystiro ciyaarta.
Talooyin ku saabsan ciyaarta Sixiroole 🙂
Saaxirku ma laha sharciyo aad u dhib badan, laakiin taasi micnaheedu maahan inay tahay ciyaar caajis ah. Xaqiiqdii, haddii aadan sameyn tixgalinta tilmaamahan tixgeli, adiga waxay u badan tahay inay ku dhegaan heerarka oo aysan awoodin inay dhaafaan.
Tani waa talada ugu horeysa ee aan ku siinayno. Marka ugu horeysa waxay umuuqataa inaysan laheyn wax culeys ah isla markaana aad si dhaqso leh uga gudbeyso heerka. Laakiin maya! Markaad rabto inaad aragto, silsiladda kubbaduhu waa weyn yihiin waxayna u socdaan si dhakhso leh oo aanad haysan wakhti aad kaga saarto oo waxa kaliya ee aad helaysaa waa inaad kubbado midab leh dhigtaa meelo khaldan.
Haa, horey ayaan u ognahay in taasi ay tahay hadafku. Laakiin waa kuwee kubadaha aad ka saari lahayd marka hore?
Markasta oo aad awoodid kubadaha ka saar madaxa silsiladda. Xusuusnow in kuwani ay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee gaara godka u horseedaya in aan u qalmin, waana tan aan rabno inaan iska ilaalino.
Iska ilow kuwa ugu dambeeya, ugu yaraan inta silsiladdu weyn tahay.
Tirtirida otomaatiga ah
Waa maxay tirtirka otomaatigani? Nooc ka mid ah sixirka sixirka? Hagaag, maya. Tani waxay la mid noqon doontaa haysashada a Istaraatiijiga. Waa inaan taas xaqiijino marka midab laga tirtirayo silsiladda, midab isku mid ah ayaa la jaan qaadaya darafyadiisa si iyaga keligood looga tirtiro markii kii ugu horreeyay la waayo.
Aad u qasan Waxaan ku siinayaa ah tusaale.
Silsiladdeenna dhexdeeda waxaan ku leenahay taxanaha soo socda: Jaale, lilac, lilac, jaalle, jaalle, buluug, cagaar, huruud ...
Meesha ugu fiican ee lagu bilaabi karo kubbada lilac waxay u dhaxayn doontaa labada lilac wada jir. Marka, waxaan ka saareynaa midabka lilac safka, sax? Iyo waxa soo socda ee dhici doona ayaa ah in marka midabka jaallaha ahi isu yimaado, saddex kubbadood oo huruud ah ay isku soo beegmaan iyaga oo keligood baaba'a.
Ma jeceshahay noocyada ciyaarta? Ma yeelay tabahaan ayaa ku caawinaya ? Sida aad arki karto, waxaa jira tanno ciyaaro ah iyo qaabab aad ugu raaxeysan karto Ciyaar sixir.
Maxaad sugeysaa inaad ku raaxeysato!